Ra'iisul wasaare Abey oo shir la yeeshay Saraakiisha Guud ee Ciidamada Itoobiya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Ra’iisul wasaare Abey oo shir la yeeshay Saraakiisha Guud ee Ciidamada...
Ra’iisul wasaare Abey oo shir la yeeshay Saraakiisha Guud ee Ciidamada Itoobiya
Ra’iisul Wasaaraha iyo Taliyaha guud ee Ciidamada Difaaca Itoobiya, Dr. Abiy Ahmed ayaa kala hadlay saraakiisha guud ee ciidamada difaaca maanta arrimo dhowr ah.
“Anaga oo kaashanayna saraakiisha guud ee Ciidanka Difaaca Qaranka, waxaan wadahadalo miro dhal ah ka qaadnay istiraatiijiyadda cusub ee difaaca iyo nashaadaadka dhismaha hay’ada”, ayuu yiri ra’iisul wasaaraha maanta.
Munaasabadda, ra’iisul wasaaruhu wuxuu uga warbixiyey saraakiisha guud qorshaha istiraatiijiyadda cusub ee difaaca oo loogu talagalay in lagu dhuuqo nusqaamaha ka jira kii hore.
Istaraatiijiyadda ayaa loo soo saaray iyada oo la raacayo dhisidda ciidan casri ah oo ku saleysan aragtiyaha maxalliga ah, kuwa gobolka iyo kuwa caalamiga ah, ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha.
Wax ka badalida istiraatiijiyaddan ayaa hirgashay iyada oo lagu saleynayo aasaaska illaa iyo taariikhda dhabta ah ee waaxda, sida Dr. Abiy.
Istaraatiijiyadda dhismaha ee hay’adda ayaa loo sameeyay qaab ka caawineysa in lagu daro dhiirrigelinta waxqabadka ciidamada difaaca ee ilaalinta madaxbanaanida qaranka iyo kor u qaadista aqbalaadda Itoobiya ee heerka caalamiga ah.
Raiisel wasaare kuxigeenka, Demeke Mekonnen ayaa sidookale kaqeybqaatey doodii kadhexeesay ra’iisul wasaaraha iyo saraakiisha guud ee ciidamada difaaca.
Previous articleSuudaan waxay ka digtay inay sii bataan khilaafka biyo-xireenka Niil
Next articleMasar oo u jawaabtay Itoobiya waxayna xaqiijisay diyaar-garowgeeda joogtada ah ee wadahadalka
Degdeg: wasiirka warfaafinta soomaaliya oo xilka ka Qaadey maareeyihii Hore…